Yan Aung: Confucius ရဲ့ အဆိုအမိန့်များတစ်ချို့
Confucius ရဲ့ အဆိုအမိန့်များတစ်ချို့
ကျွန်တော့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘလော့ဂ်လေးအတွက် စကားပုံ ကဏ္ဍလေးကို ရေးသားနေရင်း ဒီဖက်မှာပါ တင်ဖို့ အကြံဖြစ်လာလို့ တင်လိုက်ပါတယ်. ဖတ်ရှုပြီး အသိအမြင်၊ အတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ.
Excerpt from Cofucius’ Famous Quotes
တရုတ်တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီး ကွန်ဖြူးရှပ်၏ ဆိုမိန့်စကားများ တစ်ချို့
မင်းသာ ရပ်မနေခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ နှေးနှေးသွားပေမယ့်လည်း အရေးမကြီးပါဘူး.
(ဒီစာကြောင်းလေးက ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို လုပ်နေတဲ့အခါမှာ ခရီးရောက်ချင်သလောက် ပေါက်မြောက်ချင်မှ ပေါက်မြောက်လိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမကျဘဲ သွားနိုင်သလောက် ဆက်လက်သွားဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ တိုက်တွန်းအားပေးထားတာပါ.)
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး အောင်မြင်မှုဟာ ဘယ်တော့မှ မကျဆုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး. ရှုံးန်ိမ့်တိုင်း ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခြင်းပါပဲ.
(တော်တော်များများက ထင်ကြပါတယ်. အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်တိုက်ရနေမှ အောင်မြင်တာလို့. အမှန်တကယ် အောင်မြင်မှုက အမြဲတမ်း အောင်နိုင်နေခြင်းထက် ဘယ်လောက်ပဲ ရှုံးနိမ့်ကျဆုံးပါစေ. မိမိဘ၀ကို ပြန်လည်ထူမတ်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.)
သင့်ကိုယ်သင် လေးစားမှ တစ်ခြားသူတွေက သင့်ကို လေးစားလိမ့်မယ်.
(ဒီစာကြောင်းလေးကို ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်မထူးခြားသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားတယ်၊ ယုံကြည်အားထားတယ်လို့ ထင်မှတ်ယူနေတတ်ကြလို့ပါပဲ. ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်မှာတော့ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမှန်တကယ် လေးစားနိုင်ကြခြင်း မရှိပါဘူး. ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ သူတို့တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ အစမ်းသပ်မခံနိုင်ကြပါဘူး. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ တံမြက်စည်းလှည်းတဲ့ အလုပ်ပင် လုပ်ရပါစေ. မ်ိမိကိုယ်ကို လေးစားယုံကြည်မှုရှိရင် တစ်ခြားသူတွေကလည်း မ်ိမိကို လေးစားမှု ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်. လက်တွေ့ဘ၀မှာ သူများတွေက ကိုယ့်ကို လေးစားရိုသေမှု မပြုခဲ့ရင်တောင် မိမိကိုယ်ကို လေးစားယုံကြည်မှု ရှိနေသရွေ့ မယိုင်လဲ မပြိုပျက်နိုင်ပါဘူး.)
အမှန်ကို သိမြင်ပါလျက်နဲ့ မလိုက်နာ မကျင့်သုံးနိုင်တာဟာ သတ္တိနည်းနေသေးလို့ပါပဲ.
(ဘယ်အရာဟာ အမှန်တရားဆိုတာကို သိပါလျက်နဲ့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ လွဲမှားတဲ့ အတ္တရဲ့ ခိုင်းစေမှုကြောင့် အမှန်တရားနဲ့ သွေဖည်ရာကို ပြုမူလုပ်ဆောင်နေမိတတ်ကြပါတယ်. မိမိယုံကြည်ရာ အမှန်တရားကို လိုက်နာနိုင်ဖို့ ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ သတ္တိဆိုတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး လိုအပ်ပါတယ်.)
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ စိတ်နေသဘောထား ကြီးကျယ်မြင့်မားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ အပြောအဆို သိမ်မွေ့နှိမ့်ချတတ်ကြပေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်မှာတော့ အများတကာထက် သာလွန်ပါတယ်.
(လူပြောမသန်၊ လူသန်မပြောလို့ မြန်မာစကားပုံမှာလည်း ရှိပါတယ်. ဆိုလိုတာက တကယ် အလုပ်လုပ်တဲ့သူဟာ စကားသိပ်မပြောဘူး၊ စကားသိပ်ပြောတဲ့သူဟာ အလုပ်တကယ် မလုပ်ဘူးလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်)
မိမိကို မပြုမူစေလိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အပြောအဆိုများကို တစ်ပါးသူအပေါ်မှာလည်း မကျင့်သုံး မပြောဆိုမိပါစေနှင့်.
(ကိုယ်ချင်းစာတရား လက်ကိုင်ထားခြင်းဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး အောင်မြင်မှုအတွက် အခြေခံ အကျဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်.)
The superior man acts before he speaks, and afterwards speaks according to his actions.
ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ အပြောထက် အလုပ်ကို ဦးစားပေးပါတယ်. သူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသမျှကိုသာ ပြန်ပြောလေ့ ရှိပါတယ်.
(တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူဟာ ကြွားလုံးတွေ ထုတ်မနေတတ်ကြပါဘူး. ဟန်ပန်တွေလည်း များမနေတတ်ကြပါဘူး. လုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်ပြီး လိုသလောက်ပဲ ပြောတတ်ကြပါတယ်. ကိုယ်ဘာလုပ်ပြီးပြီ ဆိုတာကိုပဲ ပြန်ပြောတတ်ကြပါတယ်. မလုပ်ရသေးတာကို ဟိတ်ဟန်ထုတ်ပြီး မစားရ၀ခမန်း လူအထင်ကြီးအောင် မပြောတတ်ကြပါဘူး.)
Public Hearing, "After the Saffron Revolution"...
Pakistan, Burma and Beyond....
မှားတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုန်းလေးများ (၁)
www.english4success.blogspot.com အကြောင်း တစေ့တစောင်း
English4Bloggers Helpdesk လုပ်ကြရအောင်လား...
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်မျာ...
ဘဘရန် ဗင်းနစ်သို့ မဟာဘလော့ဂါ ဂန္ဓာရီခရီး ကြွလေပြီ….